"Wan garaaceynaa manchester unitted"mid ka mid ah xidigaha reds oo wacad ku maray iney unitted ka guuleysan doonan. » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ England/“Wan garaaceynaa manchester unitted”mid ka mid ah xidigaha reds oo wacad ku maray iney unitted ka guuleysan doonan.
“Wan garaaceynaa manchester unitted”mid ka mid ah xidigaha reds oo wacad ku maray iney unitted ka guuleysan doonan.
Laacib.so Sadio Mane ayaa kalsooni ku qaba xidigaha ay isku kooxda yihiin asiga oo aaminsan in xidigan ay kooxdiisa labinta heli doonan marka ay ka hortagan man unitted habeenka isniinta ay sii baxeyso.
naadiyada reds iyo red devills ayaa kulankoodi ugu horeeye xili ciyaaredka horyaalka premier league isku arki doona garoonka Anfield road habeenimada Isniinta, iyadoo ay Saddex dhibcood u dhexeeyaan kala saraynta horyaalka.
Mane ayaa rumaysan inay kooxdiisu sii kordhin doonto dhabaha guusha oo ay ku jirtay lixdii kulan ee u danbesay.
“Waxaanu rajeyneynaa inaanu garaacno Manchester United,” ayuu Mane u sheegay majalada braitian kasoo baxda ee the Daily Telegraph.
Wuxuu hadalka sii raaciyey: “Dabcan Anigu sidaan rajeynayo ayay dhamaan ciyaartoyda rajeyna waase kuligeena ay naga daadacsan tahay Waxaanan doonaynaa inaan ka dhabayno guuldaro aynu taabsiin man unitted”
Kooxaha man unitted iyo liverpool ayaa habeenka isniinta isaga hor iman doono kulan ka tirsan premier league koox kasta waxa ay rajeyneysaa in ay libinta hesho.
Shaxda rasmiga ah kooxaha Chievo iyo AC Milan
''Rooney waa laacibka dunida''klopp oo sidaas aaminsan